Ogaden News Agency (ONA) – Maamulka Jaaliyadda JOKA, Ururka Haweenka Ogadenya ee Koonfur Afrika iyo OYSU/KA oo Wadatashi Isugu Yimid
Maamulka Jaaliyadda JOKA, Ururka Haweenka Ogadenya ee Koonfur Afrika iyo OYSU/KA oo Wadatashi Isugu Yimid
Posted by ONA Admin	/ January 24, 2015
Waxaa salaadii Jumce kadib xafiiska Jaaliyada Ogaadeeniya Ee Koonfur Afrika kadhacay shir baladhan oo ay isugu yimaadeen maamulka Jaaliyada, Maamulka haweenka iyo xubinka warfaafinta ee Ururka Haweenka Ogaadeeniya Marwo Kowsar Faarax.
Shirkan oo ahaa mid wada tashi ah oo ururka haweenak iyo maamulka sare ee Jaaliyada u dhexeeyay ayaa gudoomiyaha Jaaliyada Mudane Maxamed Daahir ka soo jeediyay warbixin qodo dheer oo ka waramaysay xaalada halganka iyo arimaha ku saabsan wadahadala la sheegay ee ONLF iyo Ethiopia.
Intaas kadib waxaa laga wada tashaday sidii loo qaabili lahaa Hogaanka dhawaan kusoo aadan wadanka Koonfur Afrika mudane Cadaani Hirmooge iyo qaban qaabada shirwaynaha Jaaliyada oo ka dhici doona magaalada Pretoria.
Ugu danbayntii waxaa laysla qaatay qorshe cusub oo ay fulin doonaan Haweenka Ogaadeeniya ee Koonfur Afrika, Ururka OYSU iyo maamulka Jaaliyada.
Dhanka kalle waxaa isna shir isugu yimid maamulka OYSU ee xarunta ka hawlgala waxaana shirkaas ka qaybgalay hogaanka arimaha bulshada ee Jaaliyada Mudane Yuusuf Islaam.
Isku soo duuduub oo shirarkan oonisku ujeedooyin ahaa waxaa kasoo baxay qorshayaal tayo leh, Waxayna kusoo dhamaadeen guul.